FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY ALIKA GOLDENDOODLE DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny alika Goldendoodle Dog
Alika mitambatra mifangaro Golden / Poodle mifangaro
Macaroni the Goldendoodle amin'ny faha-7 taonany
Ny alika Goldendoodle dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Golden Retriever ary ny Poodle . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
F1 = 50% Golden Retriever ary 50% Poodle. Ity dia hazo fijaliana Golden to Poodle ity dia taranaka voalohany, miteraka zaza salama kokoa. Ny karazana volo dia mety milamina toy ny Volamena, na milomano / shaggy na indraindray dia toy ny Wolfhound Irlanda (fa miaraka amin'ny fahatsapana malefaka kokoa), afaka mandatsaka izy ireo na tsy mandatsaka, ny pups amin'ny fako iray ihany dia mety miovaova.
F1-B = 25% Golden Retriever ary 75% Poodle (hazo fijaliana F1 Goldendoodle sy Poodle). Ity dia Goldendoodle nateraka niverina tany Poodle.
karazana alika misy lela manga
F2 = hazo fijaliana F1 Goldendoodle sy F1 Goldendoodle. Amin'ity tsikombakomba ity dia mahazo ny isan-jato mitovy amin'ny fifangaroan'ny Golden sy Poodle mitovy amin'ny azonao amin'ny F1 Goldendoodle.
Fampahalalana Mini Goldendoodle
Fampahalalana Petite Goldendoodle
boston terrier weiner alika mifangaro
Bailey the Goldendoodle amin'ny faha-9 taonany
Topaz the Goldendoodle amin'ny taona 3 miaraka amina karazana palitao Poodle
'Nalaiko ity sarin'i Amos, Goldendoodle maintinay ity roa andro talohan'ny Krismasy. Izy no alika tian'izay rehetra mahalala azy. Alika be fitiavana sy mahafinaritra toy izany izy, tiany ny misolelaka ambony fandriana ary indraindray rehefa mamely baolina ny toe-tsaina. Na aiza na aiza alehantsika dia tsy maintsy mandeha koa izy. Mipetraka amin'ny tany efa ho roa hektara izahay ka manao fanatanjahan-tena be dia be izy. Tiany ny milalao akanjo ary manao akanjo isan-karazany. Tena mahafinaritra tokoa izy miaraka amin'ireo zanatsika ary mamela azy ireo hanao izay tiany hatao. '
Bailey the Goldendoodle mijery eo am-baravarankely
Alika kely Goldendoodle, sary nomen'ny Ayers Pampered Pets
Charly, Goldendoodle anglisy vita amin'ny volafotsy, 1 taona sy 4 volana, natolotr'i Aspen Kennels
boston terrier mifangaro amin'ny bulldog anglisy
'Ity no zanakay lahy mahafatifaty Deek Dexter Doodle. Goldendoodle ultra-cream izy. Fifaliana madio izy. 10 volana izy amin'ity sary ity ary manodidina ny 24 santimetatra ny haavony avy amin'ny tany ka hatrany an-tampon'ny soroka ary milanja 65 lbs. Ny Goldendoodle dia Golden Retriever / Poodle mahazatra hazo fijaliana, fa satria taranaka F1b, izy dia backcross ka ny dadany no tena Goldendoodle ary ny reniny dia Standard Poodle, noho izany tsy mandatsa-dra sy tsy mahazaka aretina. Nahazo azy avy amin'ny Cream of the Crop Goldendoodles & Poodles izahay. Doodles dia tia mahafinaritra ary be te hahafanta-javatra. Tiany ny mahazo ny snuggles maraina avy amin'i Neny sy i Dada ary avy eo mandeha amin'ny hazakazaka lehibe. Tsy misy fotoana manjavozavo mihitsy manodidina ny trano. Tena mahafatifaty izy. Alika sambo mahay koa izy. Tiany ny morontsiraka sy mahita kitay. Tiany ny orana. Mpihazakazaka tena mahay izy ary milalao tsara amin'ny kilalaony rehetra. Malemy fanahy be izy ary tsy mahery setra mihitsy. Tianay ny Deekdawg anay !! '
Goldendoodle olon-dehibe amin'ny hazakazaka
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Goldendoodle
Sary Goldendoodle 1
Sary Goldendoodle 2
Sary Goldendoodle 3
Sary Goldendoodle 4
Sary Goldendoodle 5
Sary Goldendoodle 6
Sary Goldendoodle 7
Sary Goldendoodle 8
fifangaroan'ny lab sy chesapeake bay retriever
Boston terrier laboratoara Mix habe
briffan griffon afangaro amin'ny shih tzu
karazana alika inona ny alika sled
zanak'alika carlin pinscher amidy
asehoy ahy ny sarin'ny alika whippet